March 2016 - Sawirrotv
Maamulka Koonfur-Galbeed oo loo Tababaray Ciidamo Cusub oo Boolis ah (VIDEO)
March 31, 2016 – Maamulka Koofur-galbeed ayaa waxaa loo tababaray laba boqol oo askar Boolis ah, Ciidamadan ayaa ayaa waxaa tababar loogu soo xiray Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, waxayna ciidamadani ka qayb qaadan doonaan liaalinta nabadgelyada Deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Askartan oo lagu biirinayo Ciidanka Booliska maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa loo soo xiray …
Dalka India: Buundo Dhismo ku socday oo soo Duntay kuna Habsatay Dad Badan (VIDEO)
March 31, 2016 – Dad badan ayaa maanta ku naf waayay kadib markii ay ku soo duntay buundo dhismo ku socday oo ku taala magaalada Kolkata oo ka taaala bariga wadanka Hindiya. Kooxaha gurmadka deg dega ah iyo booliska ayaa weli ku mashquulsan daad guraynta dadka ku dhaawacmay buundada, sheegayna in inkastoo aan la heyn tirada …
Buundadii ku Duntay Magaalada Calcutta (VIDEO)
VIDEO – 1 Dalka India ayaa waxaa ku badan Dhismooyinka halmar isku duma, waxaana loo sababeeyaa agabyada dhismaha loo adeegsado oo tayo ahaan aad u liita. VIDEO – 2 Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Xasan Xanafi oo Ka Hadlay Sidii Looga soo Qabtay Kenya iyo Jirdilka Godka CIA-da Muqdisho (VIDEO)
March 31, 2016 – Journalists For Justice oo marka la fasiro ay tahay [Saxafiyyiinta U taagan Cadaaladda] ayaa barta Internet-ka ku baahisay Muuqaal Video ah oo ay sheegeen iney ku soo bandhigayaan qaabkii uu Xasan Xanafi ugu gacan galay sirdoonka Kenya ee ku qabtay magaalada Nairobi iyo qisada xaqiiqda ah ee Filimkii (Dilaaga Wariyaha) ee dhawaan …
Muxuu Yuusuf Garaad ka yiri: Aragtideyda Muqdisho, Marti mise Muwaaddin? (Akhriso)
March 31, 2016 – Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. Waa magaalo ay tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu ku soo hirto. Waa meel ay tahay in uu si xor ah u degi karo, ka shaqeyn karo, ku noolaan karo, codkiisa ka dhiiban karo isaguna uu iska rashaxi karo. Qofkii isku daya in intaas aan sheegay uu …
Qaraxii Ka Dhacay Galbeedka Gaalkacyo (VIDEO)
VIDEO -1 Ninka Bartilmaameedka Qaraxa uu ahaa ayaa la aaminsan yahay inuu yahay Xisaabiyihii Wasaaradda Maaliyada Gobalka Mudug ee Puntland Siciid Cali Yuusuf oo ku magac dheeraa (Gaadayare). VIDEO -2 VIDEO -3 Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Isbedelka Hargeysa (VIDEO)
Hargaysa ayaa noqotay magaalo baaxadeeda ay sii laba jibaarmeyso, iyadoo halkaasina ay dib ugu soo noqonayaan dadka qurbo joogta ah ee doonaya inay dalkooda dib u dhisaan. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Xulka Qaranka ee 20-jirka Soomaaliyeed (VIDEO)
Tababare Maxamed Cabdulle Farayare oo hogaaminaya xulka ayaa warbaahinata u sheegay inay muddo bil ah tababar qaadanayeen habeen iyo maalin, diyaar garoow fiicana ay u soo galeen ciyaarahan hadda furmaya. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho